Alatsinainy 09 Septambra 2019. – FJKM
Alatsinainy 09 Septambra 2019.
2 Korintiana 4.1-15
Tsarovy fa manana rakitra soa voatahiry ao anaty vilany tany ny mino … Koa ireto no iraka lehibe ho anao anio:
1-Sahia mitory marina ny Filazantsaran’i Kristy
Tsy mora izany hiatrehana ny fanenjehana , fandavana, fanevatevana…araka ny voalazan’i Paoly eto hoe: « Fa raha miafina ny Filazantsaranay , dia miafina amin’izay ho very izany , izay nohanjambain’ny andriamanitr’izao tontolo izao , dia ny sain’ny tsy mino mba tsy hiposahan’ny fahazavan’ny Filazantsaran’ny Voninahitr’i Kristy , izay endrik’ Andriamanitra » ( 4.3-4,5 ampit 1 Kor 1.18).
I Paoly dia sahy nilaza ny azy eo amin’ny and7-12 . Izany tokoa no fiainantsika mino , toa mandalo memy , loza , afo ,trano be , olana maro kanefa mitondra ny fandresen’i Kristy isanandro . »Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika » (Rom 8.37) ;
3-Mitenena amin’ny finoana
« Ary satria manana izany fanahin’ny finoana izany indrindra izahay , araka ny voasoratra hoe : nino aho ka dia niteny (Sal 116.10) dia mino koa izahay ka miteny » (4.13) . Efa napetraky ny Tompo eo am-bavanao ny teniny izay maneho ny fahefany ao anatinao (Mar 16.17-18) . Manana hery sy fahefana ny teny aloaky ny vavanao raha mino . Andriamanitra miteny , mitondra fahariana , manasitrana , mampitsahatra loza sns…( vakio Gen 1.3-11/ Mat 8.8/ Mar 4.39/ Lio 4.35) . Efa nomeny antsika ny herin’ny teniny (Jer 1.9).